Isimo Sezulu seCARROT sibuyekezwa futhi siletha amawijethi we-XL we-iPadOS 15 | Izindaba ze-IPhone
Isimo Sezulu seCARROT sibuyekezwa futhi siletha amawijethi we-XL we-iPadOS 15
U-Angel Gonzalez | 21/09/2021 20:00 | Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone
Okusha Uhlelo lokusebenza lesimo sezulu ngoba i-iPhone ifikile nge-iOS 15. Ngalesi sibuyekezo esisha ukwakhiwa kabusha kwesithonjana kufakwa kanye nenani elikhulu lemininingwane eyengeziwe ehlelwe ngezinto ezahlukahlukene ezingama-quadrangular. Ngaphezu kwalokho, i-iOS 15 ne-iPadOS 15 ifaka ezinye izinto ezintsha ezifana nokufika kwamawijethi weXL kwi-iPad, into ebivele ilahlekile ku-iOS 14. Isimo sezulu sezulu uhlelo lokusebenza oluhlukile ukuhlola isimo sezulu futhi ivuselelwe kwinguqulo 5.4 ukuzivumelanisa nezici ezintsha zezinhlelo ezintsha zokusebenza. Phakathi kwalezo zici ezintsha kukhona amawijethi we-XL, izingqikithi ezintsha nezithonjana ezintsha.
I-CARROT Weather yethula inguqulo yayo engu-5.4 ukuzivumelanisa ne-iOS 15 ne-iPadOS 15
I-CARROT Weather iyisimo sezulu esinamandla kakhulu (futhi esazi ubumfihlo) esinikeza izibikezelo ezisontekile ezihlekisayo.
Kusha kwinguqulo 5.4 yesimo sezulu seCARROT kufaka ukufika kwe Amawijethi amakhulu ku-iPad ane-iPadOS 15. Kunamawijethi amabili: 'Isibikezelo Sami' neMephu ezisebenzisa kahle isikrini esikhulu ukuze zinikeze idatha efanelekile. Kodwa-ke, ubulungu be-Premium buyadingeka ukuthenga izibuyekezo zedatha yangemuva, futhi iwijethi ye-Maps ihambisana kuphela nobulungu be-Premium Ultra.
Bangeziwe futhi izingqikithi ezintsha ngokwezifiso ezinemibala yangemuva, imifanekiso yangokwezifiso nemibala ehlukene. Ukulungisa lezi zingqikithi ezintsha ubulungu beClub Premium buyadingeka. Ukuqhubeka nezithonjana, kungeziwe amasethi wesithonjana amathathu ezingaguqulwa kusuka kuzilungiselelo zesimo sezulu se-CARROT.
Ukuqhubeka nezindaba ezihambisana nobulungu beClub Premium, sethulwe buyekeza izaziso zezaziso 'eziphawulekayo' noma 'eziyinhlekelele' yesikhungo sezaziso. Ngaphezu kwalokho, kwethulwa futhi inkinga entsha ehlakaniphile ku-watchOS, kufana nemininingwane esingayithola kusuka kuhlelo lokusebenza. Lezi zilungiselelo zingashintshwa kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Apple Watch ku-iPhone.
IOS 15 ne-iPadOS 15 zilapha, yilokhu kuphela okudingeka ukwazi ngaphambi kokubuyekeza
Ekugcineni, bayethulwa izikrini ezintsha ezinemininingwane yesimo sezulu, isibikezelo sehora nesibikezelo sansuku zonke. Izindlela ezintsha zokuhumusha idatha zethulwa ngezithonjana ezenziwe ngaphambilini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » Isimo Sezulu seCARROT sibuyekezwa futhi siletha amawijethi we-XL we-iPadOS 15
I-Apple ikhipha izinhlobo ze-beta 1 ze-iOS 15.1, i-iPadOS 15.1, i-watchOS 8.1 ne-tvOS 15.1
Yini umdlalo INkosi Yezindandatho: Impi isinikeza yona